ရသေ့တောင်ဘက်က ရွာသားထောင်နဲ့ချီ ထွက်ပြေးနေရ အပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ
ရသေ့တောင်ဘက်က ရွာသားထောင်နဲ့ချီ ထွက်ပြေးနေရ အပါအဝင...
10 ต.ค. 2562 - 11:18 น.
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်ရွာသားထောင်နဲ့ချီ စစ်ပြေးရ
ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကျောက်တန်းကျေးရွာမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ အေအေရက္ခိုင်တပ်တွေကြား တိုက်ပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာကြောင့် ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ရွာသားတွေဟာ စစ်ဘေးလွတ်ရာ ပြေးနေရပါတယ်။
ရသေ့တောင် မြောက်ဘက် ၇ မိုင် ၊ ၈မိုင်လောက် အကွာက ကျောက်တန်းရွာနားမှာ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်နေ့က တနေကုန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် အဲဒီနားက ရွာသားတွေက ထွက်ပြေးရတာပါ။
ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ အေအေရဲ့ပြောခွင့်ရသူ ခိုင်သုခကတော့ ဒီလို တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတာကြောင့် အသေအပျောက်များတယ်လို့ သတင်းထွက်နေပေမယ့် တိုက်ပွဲစာရင်းတွေ မရသေးတာကြောင့် မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စစ်ဦးစီးပထမတန်း ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းဇော်ဦးကလည်း ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ မကြားမိကြောင်းဆိုပါတယ်။
ဒေသခံတွေပြောတာကတော့ အဲဒီတပ်မတော် စစ်ကြောင်းဟာ ကျောက်တန်းက နေ တခြားရွာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ထီးစွဲရွာကို ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၈ ရက်နေ့ကလည်း တိုက်ပွဲဖြစ်နေစဉ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဆင်သေပြင်ကျေးရွာက မူဆလင် အရပ်သားတစ်ဦး ကျည်ဆံထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရပ်သားတွေဟာ အကာအကွယ်မဲ့နေပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်ရာ ဒေသဖြစ်တဲ့ ရသေ့တောင်နဲ့ ဘူးသီးတောင် ကားလမ်းတစ်လျှောက်က ကျေးရွာတော်တော်များများက ဒေသခံတွေဟာ ရွာတွေကို စွန့်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။
ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ တစ်လအတွင်း လူငါးဦးပျောက်ဆုံးနေ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အစိုးရတပ်နဲ့ အေအေရက္ခိုင့်တပ်တွေကြား တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေတာကြောင့် ဒဏ်ရာရသူ သေဆုံးသူနဲ့ နေရပ်စွန့်ခွာသူတွေ ရှိသလို ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ နယ်နမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမှာလည်း ဒေသခံတွေ ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။
ပလက်ဝမြို့နယ် တွင်းမှာ တစ်လအတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ဦးအပါအဝင် လူငါးဦး ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (CHRO) က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့က သာယာကုန်းရွာမှာနေတဲ့ ဦးကူးဟွေးနဲ့ သူ့ရဲ့ ဇနီး ဟာ တောင်ယာကိုသွားစဉ် ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။
အေအေ ဖမ်းထားတဲ့ ပလက်ဝက ရွာသား ၁၂ ဦး ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်
ပလက်ဝနားမှာ တပ်ရဟတ်ယာဉ်ကို ပစ်ချခဲ့တယ်လို့ AA ပြော၊ တပ်မတော်ငြင်းဆို
မင်းပြားမြို့နယ် ပန်းမြောင်းကျေးရွာမှာ လက်နက်ကြီးမှန် ကလေးသုံးယောက်သေဆုံး
ဒါအပြင် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပလက်ဝမြို့နယ်ထဲက ဝန်ချောင်းဝ ကျေးရွာက ရွာသား (၃)ဦး တို့ဟာ ရိက္ခာသွားဝယ်စဉ် အပြန်မှာ စက်လှေတစ်စီးနဲ့ အတူ ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ပျောက်ဆုံးတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မည်သည့်အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ မသိရသေးပေမယ့် အဲဒီပျောက်ဆုံးတဲ့နေရာဟာ နှစ်ဖက်တပ်တွေ သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့နေရာလို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။
ဒီနေ့အချိန်အထိ ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပလက်ဝမြို့နယ်တွင်းမှာ သတင်းအစအန မရ ပျောက်ဆုံးသူ စုစုပေါင်း (၁၅) ဦး ရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့် နှစ်ဖက်တပ်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ လက်ချက် မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုထားကြပါတယ်။
တူရကီနိုင်ငံက ဆီးရီးယားနိုင်ငံအရှေ့မြောက်က ခါ့ခ်တွေကို ထိုးစစ်ဆင်
တူရကီနိုင်ငံဟာ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းက ခါ့ခ်လူမျိုးတပ်ဖွဲ့တွေကို ဝေဟင်နဲ့မြေပြင် ထိုးစစ်ဆင်တာတွေ စတင်နေပါပြီ။
တူရကီရဲ့အခုလုပ်ရပ်ကို နိုင်ငံတကာက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှုတ်ချပါတယ်။ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီနဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ကလည်း ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အစည်းအဝေးပွဲလုပ်ဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့ ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ လုပ်ရပ်ကောင်း မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုပါတယ်။
တူရကီ ညကလပ်မှာ တိုက်ခိုက်သူကို ဆက်ရှာနေ
တူရကီသမ္မတ အာဒိုဝမ်ရဲ့ပြောခွင့်ရသူ ဒေါက်တာ အီဘရာဟင် ခါလင်ကတော့ ထိုးစစ်ဆင်တဲ့နယ်မြေမှာ အကြမ်းဖက်သမား အစွယ်အပွားတွေကို သုတ်သင်ပြီး ဆီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ်လုံခြုံရေးဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ ထိုးစစ်ဆင်တာလို့ BBC ကို ပြောပါတယ်။
တူရကီဟာ ဆီးရီးနိုင်ငံရဲ့ နယ်မြေ အချုပ်အခြာ၊ နိုင်ငံရေးပေါင်းစည်းမှုကို လေးစားပြီး ဆီးရီး ယားရဲ့ နယ်မြေတစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုမျှ သိမ်းပိုက်ဖို့ ဆန္ဒမရှိဘူးလို့လည်း ဒေါက်တာ ခါလင်က ပြောပါတယ်။
အခုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ဒေသမှာ အိုင်အက်စ်အဖွဲ့ကို နှိမ်နင်းဖို့ ခါ့ဒ်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ညွန့်ပေါင်းဖွဲ့တဲ့ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေ ဆုတ်ခွာသွားချိန်မှာ တူရကီရဲ့ထိုးစစ် ထွက်ပေါ်လာတာပါ။
อัลบั้มภาพ ရသေ့တောင်ဘက်က ရွာသားထောင်နဲ့ချီ ထွက်ပြေးနေရ အပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ